Ku dhawaad 30 qof oo ku dhimatay iskuul kuyaala Dalka Malaysia | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ku dhawaad 30 qof oo ku dhimatay iskuul kuyaala Dalka Malaysia
Ku dhawaad 30 qof oo ku dhimatay iskuul kuyaala Dalka Malaysia
Muqdisho(SONNA) Ilaa inta la xaqiijiyay 25 qof ayaa ku geeriyootaykadib markii dab xoogan uu ka kacay xalay mid kamid ah iskuulada Islaamiga ah ee kuyaala magalaaada Kuala Lumbur ee xarunta Dalka Malesia.
Dadka ku dhintay dabkaasi ayaa ah 23 arday iyo 2 macalin waxaana ku dhaawacantahay ialaal 7 qof oo kale,lamana oga ilaa iyo haatan sababta dhabta ah ee dhalisay dabkaasi,oo ka kacay xarun Qur’aanka Kariimka ah lagu xifdiyo oo lagu magacaabo Ittifaqiyah,waxaana uu dabkaasi kacay aroor hore xili ay jiifeen inta badan dadka.
Khirudin Drahman, oo ah agaasimaha Hay’adda deb demiska ee Dalkaasi Malesia oo goobtaasi gaaray ayaa Wakaaladda Wararka Faransiiska ee AFP u sheegay in qasaaraha uu intaasi la egyahay,waxaana uu intaasi ku daray in la soo bad baadiyaya 11 qof oo kale.
Waxaa soconaya baaritaano ay hay’adaha ammaanka Dalkaasi ku hayaan sababta dhalisay dadkaasi,waxaana weli aan si rasnmi ah macluumaad dheraad ah looga bixin da’da ardaydaasi oo iskuulka hoyga ee Ittifaqiyah lagu xanaaneeyo.
Dalka Malaysia ayaa inta badan can ku ah xarumaha lagu barto duruusta diiniga ah oo ay ardaydo seexdaan,waana wadanka ugu ee Qaaradda Assia oo ay ardayda ka kala socota wadamada Africa ay waxbarasho u aadaan.
Previous articleDowladda Somaaliya iyo Hay’adda ICAO oo kala saxiixday heshiis ku saabsan wareejinta Hawada Soomaaliya
Next articleWasiirka Arrimaha Dibadda oo qaabilay Safiirka Imaaraatka ee Soomaaliya